🥇 uphendlo-mali lwemisebenzi yekhredithi
Ungathumela yonke imibuzo yakho ku: info@usu.kz
Ngaba uyafuna ukuthenga inkqubo?
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 848
Inkqubo yokwenza: Windows, Android
Iqela leenkqubo: USU software
Injongo: Isishishini esizenzekelayo
uphendlo-mali lwemisebenzi yekhredithi
Ingqalelo! Unokuba ngabameli bakho kwilizwe lakho okanye kwisixeko!
Unokujonga inkcazo ye-franchise yethu kwikhathalogu ye-franchise: ilungelo lokushishina
Sikulungele ukumela iimpahla zakho okanye iinkonzo kwilizwe lethu.
Ividiyo ye-accounting yokusebenza kwamatyala
Le vidiyo inokujongwa kunye nemibhalo engezantsi ngolwimi lwakho.
Khuphela uhlobo lwedemo
Xa uqala le nkqubo, unokukhetha ulwimi.
Imali: EUR RUB USD
Uhlawula kube kanye kuphela. Akukho ntlawulo yenyanga!
Inkqubo yomsebenzisi omnye
Iiyure zokuxhasa zasimahla
Iiyure ezongezelelweyo zenkxaso yezobugcisa
Myalelo we-accounting wokusebenza kwekhredithi
Thenga le nkqubo
Intengiselwano yemali mboleko irekhodwa ngokuzenzekelayo kwiUSU Software, okuthetha ukuba nayiphi na intengiselwano yemali mboleko iya kuboniswa kwangoko kwiakhawunti nakuwo onke amaxwebhu anxulumene nemali mboleko, kubandakanya umbala, obonelelwa kwinkqubo yobalo oluzenzekelayo ukuqinisekisa ukulawulwa okubonakalayo kwayo yonke imisebenzi ezenzekayo xa uhlawula imali mboleko. Yonke imisebenzi yenziwa ngaphandle kokuthatha inxaxheba kwabasebenzi, kungoko ke ukuvunywa 'kobalo oluzenzekelayo', elenza ukuba ubalo ngqo lungasebenzi kakuhle, kuba isantya salo naluphi na umsebenzi sisiqwengana somzuzwana, nokuba sithini isixa sedatha. Ukuqhubekeka, kodwa kusebenza ngokugqibeleleyo ngenxa yedatha yokugubungela eya kurekhodwa. Ngapha koko, ngogcino-zincwadi oluzenzekelayo, lonke ubalo lwenziwa ngokuzenzekelayo, kubandakanya ukubalwa kwenzala kunye nokuqokelelwa kwezohlwayo, ukubalwa kwakhona kwentlawulo xa inqanaba lotshintsho lwangoku lwemali yamanye amazwe lutshintsha ukuba imali-mboleko ikhutshwe ngemali yelinye ilizwe, kwaye intengiselwano kwimali mboleko enjalo iqhutywa ngokulingana nelizwe.
Ukwenza ingxelo ngemisebenzi yetyala kwimali yamanye amazwe yenziwa ngokwemigaqo efanayo neyemali mboleko eqhelekileyo, kodwa, njengomthetho, amaqela ayavumelana ngokusesikweni kwentengiselwano ukubala kwakhona iintlawulo xa inqanaba lotshintshiselwano lwangoku lwemali yelizwe apho le mboleko mboleko kukhutshwe utshintsho, ukuba imali yelinye ilizwe ithatha iinguqu ezinkulu. Kufuneka kuqatshelwe ukuba ikhredithi kwimali yamanye amazwe, ukuba yexeshana elifutshane, inenzuzo enkulu kunemali mboleko kwimali yesizwe kuba kungabikho kutshintsha kwemali yenqanaba langaphandle, ukusebenza kwimali mboleko enjalo kufuna ukuhlawulwa okuphantsi kunakwimeko yemali mboleko phantsi kweemeko ezifanayo kwimali yalapha. Uqwalaselo lophicotho-zincwadi lwemisebenzi yamatyala lusasaza ngokuzenzekelayo iimali-mboleko ‘zangaphandle’ ngeentlobo, ezimiselwa ziinjongo zemboleko mali yelinye ilizwe, kubabolekisi, izivumelwano, kwaye ngokuzimeleyo ziqhuba zonke iintlobo zemisebenzi ezinikezelwa kwiinkonzo zenkonzo yemali yangaphandle. Imisebenzi yayo ibandakanya ulawulo kulwabiwo oluchanekileyo lwezixhobo zokuthenga ngetyala, ukuzalisekiswa kwangexesha kweembophelelo kubo, kunye nokuthobela iimfuno zomthetho wotshintshiselwano lwangaphandle.
Uqwalaselo lobalo lwentsebenzo yamatyala kwimali yelizwe langaphandle liza kuqwalasela ngokuzenzekelayo umahluko kumanqanaba otshintshiselwano kwintlawulo yenzala, umahluko kumanqanaba otshintshiselwano kwintlawulo yetyala eliyintloko ngomhla wentlawulo, ngokweshedyuli ebekelwe bona, ekwabekwa iveliswe ngokuzimeleyo ngoqwalaselo. Ulawulo lwemali zamanye amazwe, ngakumbi ngokuchanekileyo, ukubeka esweni iirhafu zabo zangoku, inkqubo ye-automated accounting iqhuba ngokuzenzekelayo kwaye, ukuba iyatshintsha ngokukhawuleza, yenza imisebenzi ngokukhawuleza ukubala iintlawulo ngokwenqanaba elitsha, ukwazisa abathengi malunga noku ngokuzenzekelayo ngabo banxibelelana thaca kwiziko ledatha, ukuba isoftware ifakiwe kwiziko lezemali.
Ukuphendula ngokusebenza kwemali yelinye ilizwe kwenziwa xa kukhutshwa imali ngetyala, ngexesha lokuhlawulwa kwakhona okanye xa kubuyiswa. Ukuphendula kuyo yonke imicimbi, babhalisiwe kwiirejista zekhompyuter ukusukela inkqubo igcina ulawulo olungqongqo kwimithombo yezemali, ukwenza iifom ezizodwa ezidwelisa intengiselwano, ezenziwa ngexesha lokunika ingxelo zineenkcukacha ezicacileyo kulowo nalowo kubo, kulungiswa imihla, imihlaba , counterparties, kunye nenani labantu abajongene nalo msebenzi.
Ukugcina izibonelelo, ezona zibaluleke kakhulu lixesha kunye nemali, ngumsebenzi wenkqubo, ke ngoko, yenza lula zonke iinkqubo kangangoko kwaye, ngokwenza njalo, zikhawulezise, zishiya abasebenzi benoxanduva olunye-ukungena kwedatha, okokuqala yangoku. Ukurekhoda ulwazi olufunyenwe kubasebenzisi, ukuthembeka nokusebenza kwalo, iijenali ezizodwa ze-elektroniki zinikezelwa, apho abasebenzi bathumela khona imiyalezo malunga nezenzo zabo ezenziwa ekwenzeni imisebenzi. Ngokusekwe kolu lwazi, inkqubo ezenzekelayo ibala kwakhona izalathi ezibonisa imeko yangoku yeenkqubo zomsebenzi. Ngokusekwe kwizalathi ezihlaziyiweyo, izigqibo zolawulo zenziwa ukuqhubeka nomsebenzi ngendlela enye okanye ukulungisa nayiphi na inkqubo ukuba ukuphambuka kwesalathi esivela kwesicwangcisiweyo sikhulu ngokwaneleyo. Ke ngoko, umsebenzi wokusebenza kwabasebenzi ubalulekile, ovavanywa yinkqubo yokubala xa kubalwa umvuzo wabasebenzi kubasebenzisi ekupheleni kwexesha lokunika ingxelo.
Inkqubo ngokwayo ibala umvuzo wenyanga womsebenzi ngamnye, kuthathelwa ingqalelo umgangatho wolwazi oluthunyelwe kwimigodo yomsebenzi, ke abasebenzi banomdla wokongezwa kwangexesha kwedatha kunye nokuthembeka kwabo. Ukulawulwa kolwazi oluvela kubasebenzisi kwenziwa ngabaphathi kunye nenkqubo ngokwayo, iphindaphinda le misebenzi, kuba baneendlela ezahlukeneyo zokuvavanya, ngaloo ndlela bayancedisana. Abaphathi bajonga iilog zabasebenzi ukuba bayayithobela na imeko yangoku yokuhamba komsebenzi, apho basebenzise khona umsebenzi wophicotho-zincwadi, obonisa kanye ukuba loluphi ulwazi olongezwe kwinkqubo ukusukela ngetsheki yokugqibela kwaye, yiyo loo nto, ikhawulezisa. Inkqubo yobalo lwemisebenzi yetyala igcina ulawulo kwizalathi, iseke ukuthotyelwa phakathi kwazo, ezingabandakanyi iimpazamo.
Inkqubo yobalo yemisebenzi yamatyala ivelisa iziseko zedatha ezininzi, kubandakanya umgca wemveliso, iCRM esecaleni lomthengi, isiseko sedatha yamatyala, isiseko sedatha yamaxwebhu, isiseko somsebenzisi kunye nedathabheyisi yamashishini. I-CRM iqulethe imbali yokunxibelelana nomthengi ngamnye ukusukela ngexesha lobhaliso, kubandakanya iifowuni, iintlanganiso, i-imeyile, isicatshulwa seendaba, amaxwebhu kunye neefoto. Iziko ledatha elinamatyala liqulathe imbali yemali mboleko, kubandakanya nomhla wokukhutshwa, iimali, amaxabiso enzala, ishedyuli yokuhlawula, ukongezwa kwezohlwayo, ukwenziwa kwetyala, kunye nokuhlawulwa kwetyala. Ukwenza ingxelo ngeentengiselwano kwindawo yogcino lwetyala akuyi kuthatha ixesha elininzi njengoko isicelo ngasinye sinesimo kunye nombala kuso, ukuze ukwazi ukujonga imeko yangoku ngaphandle kokuvula amaxwebhu. Inkqubo ixhasa ngokukodwa ukubonakaliswa kombala wezalathi kunye namanqanaba ukuze kugcinwe ixesha labasebenzisi. Umbala ubonakalisa inqanaba lokuphumelela kwesiphumo esifunekayo.
Inkqubo yobalo yemisebenzi yamatyala ixhasa ngokukodwa ukudityaniswa kweefom zombane. Zinefomathi yokugcwalisa efanayo, ukuhanjiswa kolwazi okufanayo, kunye nezixhobo zolawulo. Inkqubo ibonelela ngoyilo lomntu kwindawo yokusebenza yomsebenzisi-ngaphezulu kwama-50 ongakhetha kuyilo lwe-interface kwaye unokukhethwa ngokuskrola. Abasebenzisi banokungena kunye neepaswedi zokhuseleko kubo, ezibonelela ngeefom zobuqu zomsebenzi kunye nenani elifunekayo lolwazi lwenkonzo. Ukungena kungenisa indawo eyahlukileyo yokusebenza-indawo yoxanduva lomntu, apho yonke idatha yomsebenzisi iphawulwe ngokungena ngemvume, okufanelekileyo xa ukhangela i-misinformer. Ujongano lwabasebenzisi abaninzi lunceda ukusombulula ingxaki yokwabelana xa abasebenzisi beqhuba umsebenzi ngaxeshanye njengoko ungquzulwano lokonga idatha lupheliswa. Inkqubo ngokuzimeleyo ivelisa konke ukuhamba kwamaxwebhu akhoyo ngoku, kubandakanya iingxelo zemali, kunyanzelekile kumlawuli, iphakheji epheleleyo yamaxwebhu ukufumana ikhredithi.
Inkqubo igcina iirekhodi zamanani eziqhubekayo kuzo zonke izikhombisi zentsebenzo, ezenza ukuba kube nako ukwenza ucwangciso olusebenzayo kwixesha elizayo, ukuqikelela iziphumo. Ngokusekwe kubalo lwamanani, zonke iintlobo zemisebenzi ziyahlalutywa, kubandakanya uvavanyo lwentsebenzo yabasebenzi, umsebenzi wabathengi, kunye nemveliso yeendawo zentengiso. Uhlalutyo lwazo zonke iintlobo zemisebenzi, ebonelelwa ukuphela kwexesha ngalinye lokunika ingxelo, yenza ukuba kube lula ukulungisa iinkqubo kwangexesha, kunye nokwenza intengiselwano kwezemali. Inkqubo ixhasa unxibelelwano olusebenzayo-lwangaphakathi nolwangaphandle, kwimeko yokuqala iifestile ezinokuvela, kunxibelelwano lwesibini lwe-elektroniki- i-imeyile, iSMS, iViber kunye neefowuni zezwi.
Uhlobo lwesibheno *Thenga le nkquboCela intethoUkubuza umbuzoUncedo ngohlobo lwedemo
Umyalezo awuthunyelwanga. Nceda uzame kwakhona mva.
Umyalezo uthunyelwe ngempumelelo! Enkosi ngesicelo sakho! Kwixesha elizayo elikufutshane, uya kuqiniseka ukufumana impendulo.
Siza kuba kwi-intanethi kungekudala . Okwangoku, cofa apha ukusithumela umyalezo ngeposi
Ukulawulwa kwexesha lomsebenzi
Inkqubo yolwazi lwedatha
Urhwebo kunye nendawo yokugcina izinto
Inkqubo yevenkile yeentyatyambo
Inkqubo yorhwebo ngekhomishini
Imveliso kunye nemveliso
Inkqubo yotshintshiselwano lwemali
Inkqubo yevenkile yokuthenga iimpahla
Inkqubo yemibutho encinci
Isoftware yentengiso yenethiwekhi
Inkqubo yesalon yokuzilungisa
Inkqubo yesikolo somdaniso
Inkqubo yeziko lokuzonwabisa
Inkqubo yolawulo lweklabhu
Iimoto kunye nokuhanjiswa
Inkqubo yenkonzo yemoto
Inkqubo yokuhlamba imoto
Inkqubo yezinto ezisetyenziswayo
Inkqubo yokuthengisa amatikiti
Isoftware yearhente yokuguqulela
Inkqubo yokucoca indawo eyomileyo
Inkqubo yendlu yokushicilela
Inkqubo yearhente yentengiso
Inkqubo yeziko leenkonzo
Inkqubo yenkampani yabucala yezokhuseleko
Sineenkqubo ezingaphezulu kwekhulu. Ayizizo zonke iinkqubo eziguqulwayo. Apha ungabona uluhlu olupheleleyo lwesoftware
uphendlo-mali kunye nokunika ingxelo ngeziko letyala
ukubalwa kwemali kubarhwebi bamatyala
uphendlo lwamashishini amatyala
accounting yemali mboleko
ukubalwa kwemali yenzala engahlawulwanga kwimali mboleko
accounting yeekhredithi zexesha elifutshane kunye nemali mboleko
accounting yeemali-mboleko zexesha elifutshane
accounting kumaziko emboleko
accounting kumaziko emali kunye namatyala
accounting kwimibutho yemali encinci
ubalo lwenzala eyongezelelekileyo kwimali mboleko
uphendlo lwemali mboleko yebhanki
uphendlo lwabathengi kwii-MFIs
accounting yabathengi bamaziko emboleko
uphendlo lweekhredithi kunye nemali mboleko
ingxelo yobambiswano ngeentengo zemboleko
upicotho-zincwadi lwenkcitho yeziko lemboleko
ubalo lwenkcitho kwimali mboleko nakwimali mboleko
ubalo lwenkcitho kwimali mboleko kunye namatyala
uxanduva lwentlawulo yemali mboleko
uphendlo-mali lwemali kumaziko okuthenga ngetyala
uphendlo lwemali mboleko enikiweyo
uphendlo-mali lokunika iikhredithi
ubalo lwengeniso yamaziko emboleko
ubalo lwenzala kwimali mboleko ebhankini
uphendlo lweekhredithi kunye neemali mboleko ezikhutshiweyo
uphendlo lwemali mboleko ekhutshiweyo
uphendlo lwemali mboleko
uphendlo lwemali-mboleko nezemali
ubalo lwemali mboleko kunye neenkonzo zazo
ukubalwa kwemali-mboleko kwii-MFIs
uphendlo lwemali mboleko zabantu
ingxelo yekhomishini yemali mboleko
ubalo lweendleko zemboleko
uphendlo lwentlawulo yemali mboleko
accounting yeemali-mboleko zexesha elide
uphatho-mali lombutho oswelekileyo
uphendlo lwemali encinci
uphendlo lwentlawulo kwimali mboleko
uphatho-mali lwemali-mboleko efunyenweyo kunye nemali-mboleko
uphendlo lweendawo zokuhlala kwiikhredithi nakwimali mboleko
uphendlo lweendawo zokuhlala kwiimali-mboleko
Inkqubo yocwangciso-mali yamakhredithi
Inkqubo yocwangciso mali yamaziko emboleko
Inkqubo yobalo kwii-MFIs
Inkqubo yobalo mali yamatyala
Inkqubo yobalo lweentlawulo zemali-mboleko
Uhlalutyo kunye nokubalwa kweekhredithi
Uhlalutyo lwamatyala kunye nemali mboleko
usetyenziso lophicotho-zincwadi lwamaziko emboleko
usetyenziso lophicotho zincwadi zemali mboleko
usetyenziso lwamaziko emboleko
usetyenziso lwemibutho emincinci
oomatshini bokuzenzela kwimibutho yemali encinci
ukuzenzekelayo kwe-accounting kwi-MFIs
ukufunyanwa okuzenzekelayo kweekhredithi
oomatshini abazenzekelayo be-accounting
Inkqubo yekhompyuter yeekhredithi
Inkqubo yekhompyuter yamaziko emboleko
Inkqubo yekhompyuter yee-MFIs
Inkqubo yekhompyuter yemibutho yemali encinci
Inkqubo yekhompyuter ye-microloans accounting
Ulawulo lwemibutho encinci
Ulawulo lweekhredithi kunye nemali mboleko
Ulawulo lwentsebenziswano ngetyala
Ulawulo lwamaziko emboleko
Ulawulo lwemibutho yemali encinci
Ulawulo lwentlawulo yemali mboleko
Ulawulo lokufunyanwa kwentlawulo yemali mboleko
I-CRM yokunika ingxelo ngeekhredithi
I-CRM yolawulo-mali lwemali-mboleko
I-CRM yabarhwebi bamatyala
I-CRM yamaziko emboleko
I-CRM yemibutho yemali encinci
I-CRM ye-microloans accounting
Inkqubo yokuchonga abathengi yeziko letyala
Ubalo mali lweekhredithi kunye nemali mboleko
Ulawulo lwangaphakathi lweziko letyala
Ulawulo lwangaphakathi lwe-MFIs
Imithetho yolawulo lwangaphakathi yamaziko emboleko
Imithetho yolawulo lwangaphakathi lwe-MFIs
Ulawulo kumbutho wezezimali kunye nowekhredithi
Ulawulo lwemali mboleko yebhanki
Ulawulo lwentsebenziswano yamatyala
Ulawulo lwamashishini okuthenga ngetyala
Ulawulo lwezezimali kunye neekhredithi
Ulawulo lwemali-mboleko kunye neekhredithi
Ulawulo lwentlangano encinci
Ulawulo lombutho wezemali ezincinci
Inkqubo yoLawulo yee-MFIs
Inkqubo yoLawulo lweeMFIs
Inkqubo yobalo lwemali encinci
Ukuzenzekelayo kwimali encinci
Inkqubo ekwi-Intanethi yee-MFIs
Inkqubo kunye nenkqubo yokubalwa kwemali yamaziko emboleko
Umbutho kunye nolawulo lwezezimali kunye neekhredithi
Umbutho wobalo mali lweekhredithi
Umbutho wobalo mali lwentengiselwano ngetyala
Umbutho womsebenzi wentlangano encinci
Umbutho womsebenzi we-MFIs
Umbutho womsebenzi wemibutho yemali encinci
Inkqubo yokuhlawula ii-MFIs
Iinkqubo zemibutho yemali encinci
Inkqubo yobalo mali lweekhredithi
Inkqubo yobalo mali lweekhredithi kunye nemali mboleko
Inkqubo yokubalwa kwemali-mboleko
Inkqubo yabathengi beziko letyala
Inkqubo yolawulo lweekhredithi
Inkqubo yokulawulwa kweeMFIs
Inkqubo yentsebenziswano yamatyala
Inkqubo yamashishini etyala
Inkqubo yamaziko emboleko
Inkqubo yezemali kunye neekhredithi
Inkqubo yezemali kunye nokusasazwa kwemali kwiikhredithi
Inkqubo yabathengisi bemali mboleko
Inkqubo yobalo lwemicrooloans
Isoftware yobalo lweekhredithi
Isoftware yokusebenzisana ngetyala
Isoftware yamaziko emboleko
Isoftware yobalo mali
Isoftware yemibutho encinci
Isoftware yombutho wemali encinci
Iipredishithi zamaziko emboleko
Inkqubo yemali encinci
Inkqubo yombutho wemali encinci
Inkqubo yemali mboleko
Hlela isoftware entsha